Sijongene neNhlonipho 9 kunye neXiaomi Mi6 | I-Androidsis
Sijongene neNhlonipho 9 kunye neXiaomi Mi6
URafa Rodríguez Ballesteros | | Iiselfowuni, Xiaomi
Ekugqibeleni siya kuba ne-Honor 9 emnandi ekhoyo eSpain. Kwaye njengoko sithanda ukuyenza kwi-Androidsis ngalo lonke ixesha sifumana i-smartphone entsha, lixesha lokuba uthelekise. Kulungile kubasebenzisi ukuba zininzi iifowuni ezinenqanaba lokusebenza. Kwaye le Mbeko 9 ifika ishukumisa eyomeleleyo kwintengiso.
Njengoko le smartphone kufanelekile, siza kuyibeka kwiingxabano kunye nabona banamandla kakhulu kwindlu nganye. Ngeli xesha lithuba likaXiaomi. Imbeko kunye noXiaomi bafikelela kwisabelo sentengiso ngakumbi nangakumbi, kwaye oku kungenxa yomsebenzi omkhulu. Kwaye iziqhamo zalo msebenzi zizo zombini iimeko zeefowuni ezikhethekileyo.
1 Ezimbini "phezulu kwoluhlu" ngaphandle kwezakhiwo
2 Imbeko 9 iphendula kwiimfuno zabasebenzisi abancinci
3 Itafile yokuthelekisa Hlonipha i-9 vs Xiaomi Mi6
Ezimbini "phezulu kwoluhlu" ngaphandle kwezakhiwo
Kule thelekisa sijamelene nemizekelo emibini emikhulu ethi unokwenza into "enkulu" ngaphandle kokuxhaphaza amaxabiso aphezulu esibhakabhakeni. Iitheminali ezibonelela ngokona kunkulu ngokwembali. Kodwa ewe, kumaxabiso ngamanye amaxesha angaphantsi kwesiqingatha.
El Xiaomi Mi6, Sele sithethe nawe kutshanje, ukusungulwa kwayo ibiyinto yokudumisa kunye nokugxeka. I-smartphone enamandla ngokwenene eneempawu "eziphezulu" ezingaphantsi kwamakhulu amahlanu ee-euro yinto esingayiqhelanga. Kodwa kukho imigca ethile kunye nokupheliswa okusikhumbuza kakhulu kwezinye izixhobo.
I-Honor 9 entsha isungulwe kwintengiso yokuqhayisa ngekhamera emibini. Ukulandela ulawulo lwangoku ngokweekhamera ezimbini, i-Honor 9 yayingazukuba ngaphantsi. Ukuba ufuna ukukhuphisana ne-greats, kuya kufuneka ufake isandla kwizinto ezinkulu, kwaye ikhamera yakho yenzelwe eyona ndawo iphakamileyo.
Con iilensi ezimbini, enye inee-megapixels ezili-12 enye inee-megapixels ezingama-20 Iyakwazi ukufaka kwi Ukuqaqamba okungama-200% ngaphezulu. Imibala kunye nee-shades ezibonisa nakwimeko eziphantsi zokukhanya. Kubandakanya inoveli Umsebenzi obizwa ngokuba yi "3D panorama" loo nto yenza imifanekiso yoqobo.
Ngasemva kwesiphelo, apho eyona nto inomtsalane kuyo, yikhamera, sine ukugqitywa kweglasi egobile. Isiphelo esihle kakhulu nesahlukileyo ekunokwenzeka ukuba siethe-ethe. Ngokuphambili, kule meko ubungakanani bescreen sikwimida eqhelekileyo. Ngobungakanani be I-intshi ye-5,15 kunye nepaneli epheleleyo ye-HD Iyazikhusela kakuhle ngokubonisa imibala eqaqambileyo kwaye yenza okusesikweni kwikhamera yayo enkulu.
Imbeko 9 iphendula kwiimfuno zabasebenzisi abancinci
Le yindlela inkampani yaseAsia ngokwayo esichaza ngayo isixhobo sayo esitsha. Kodwa zithini iimfuno zomncinci kule ndawo? Ubuncinane enye Isiphelo esinamandla esikwaziyo ukumelana neemfuno eziphezulu zokusebenzisa iiyure. Into ehloniphekileyo, kunye nayo 32oo mAh ibhetri ilungiselelwe ngokugqibeleleyo kunye neprosesa yayo ejolise ekusombululeni.
Amandla anikezelwa kwinoveli yakhe iprosesa Isiphelo esiphakamileyo sikaHuawei, Kirin 960. Oko wondla kunye I-4GB ye-RAM uthembisa intsebenzo entle. Kwaye enye 64 GB yokugcina Ubuncinci obunesidima, ewe, sinako ukwandisa ngamakhadi ememori ukuya kuthi ga kwi-256 GB. Ngale ndlela sinememori, ukuzimela kunye namandla ngexabiso eliqulathiweyo. Omncinci kwaye hayi baninzi baya konwaba.
Zombini iiterminal zilukhetho olukhulu lokujonga. Imbeko kunye neXiaomi bafumana umhlaba kwaye ngokuya benika umsebenzisi ukuzithemba okukhulu. Ukuba ugqibe kwelokuba ugqithele kwisizukulwana esitsha sezona zinto zifumanekayo, nazi ezinye zeendlela ezizezinye zomzuzu.
Itafile yokuthelekisa Hlonipha i-9 vs Xiaomi Mi6
Umzekelo Hlonipha i9 Xiaomi Mi6
Isikrini 5.15 intshi 5.15 FHD
Isigqibo I-1080P ye-HD epheleleyo (iipikseli ze-1920 x 1080) 428ppi I-1080 FHD ene-426pppi
ICPU I-Kirin 960 (ii-cores ezisibhozo / 4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz) I-835GHz Octa-Core Snapdragon 2.45
i-ram 4 GB 6 GB
Ukugcina I-64 GB iyandiswa ngekhadi le-MicroSD 64GB / 128GB
Igumbi eliphambili ezimbini ze-12 Mpx RGB + 20 Mpx monochrome I-12 MPx i-lens-angle angle kunye ne-F / 1.8 ukuvula + ukuzinza kwe-optical + isigaba se-autofocus + 12 MPx lens telephoto lens kunye ne-2X zoom zoom
Ikhamera yangaphambili I-megapixels ze-8 I-megapixels ze-8
Izixhobo Inzwa yeminwe + ye-accelerometer + gyroscope Isikena esingaphambili seFingerprint + Accelerometer + iGyroscope + Isenzi soSondelelo + seCompass yedijithali + neBarometer
Conectividad I-Bluetooth 4.2 + NFC + iWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 GHz I-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac + iBluetooth 5.0 + NFC + i-USB yohlobo C
IGPS I-GPS I-A-GPS / GLONASS kunye neBDS
Ibhetri I-3200 mAh ngetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza I-3350mAh ngeTekhnoloji ekhawulezayo yokutshaja 3.0 ngokukhawuleza
Ubukhulu X x 147.3 70.9 7.45 mm X x 145.2 70.5 7.5 mm
U bunzima I-155 gram I-168 gram yemodeli esemgangathweni kunye ne-182 g yemodeli yeceramic
Inkqubo yokusebenza I-Android 7.0 Nougat ene-EMUI 5.1 ujongano lwesiko I-Android 7.1.1 ene-MIUI 8.0 ujongano
Amanani I-euro ezingama-449 (i-64 GB ROM) I-377 euro (64GB)
Asiyi kukuxelela ukuba yeyiphi engcono. Kodwa ukuba sinokuthi enye yezi ndlela zimbini ziya kuba yinto eqinisekileyo. Indawo yokuvavanya ngenqaku akukho mntu uphumeleleyo. Iimpawu zibaluleke kakhulu nakomnye nomnye, phakathi kwawo umahluko wekhamera yeHonor 9. Ngoku isigqibo sesakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sijongene neNhlonipho 9 kunye neXiaomi Mi6
I-Qualcomm ivula iiprosesa ezintsha ze-Snapdragon 450 kunye ne-Snapdragon Wear 1200
Imbeko 9 Vs OnePlus 5: Uhlalutyo lokuthelekisa